Emirates dia manamarika ny dingana lehibe fanaovana vaksiny UAE miaraka amin'ny sidina manokana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Emirates dia manamarika ny dingana lehibe fanaovana vaksiny UAE miaraka amin'ny sidina manokana
Sidina manokana any Emirates izay tsy hitondra afa-tsy ny ekipa sy ny mpandeha vita vaksiny tanteraka
Sidina A380 hitondrana ekipa sy mpandeha vita vaksiny tanteraka
Flyers hiaina cabins A380 vaovao an'ny Emirates ary ny haitao farany eto an-tany izay ahafahan'ny dia mandeha tsara sy mandeha mamaky ny seranam-piara-manidina.
Vola azo avy amin'ny sidina hatolotra ho an'ny Emirates Airline Foundation
Emirates dia mampiseho ny fandrosoana mahatalanjona an'ny Emirà Arabo Mitambatra miaraka amin'ny sidina manokana izay tsy hitondra afa-tsy ny ekipa sy ny mpandeha vita vaksiny tanteraka.
Amin'ny 10 aprily 2021, hiala ny sidina manokana EK2021 Dubai International Airport amin'ny 12:00 ora eo an-toerana, hamakivakiana faritra maro manerana an'i UAE. Hiverina any Dubai ny sidina amin'ny 14:30 ora eo an-toerana.
Ny sidina EK2021 sidina tokana dia hetsika tsy manam-paharoa izay tsy mankalaza ny fahombiazan'ny fandaharan'asan'ny fanaovam-baksiny UAE hatramin'izao, fa manasongadina ihany koa Emirates'fandrosoana amin'ny fanaovana vaksiny ny mpiasa ao aminy ary indrindra ny mpanamory fiaramanidina sy ny mpiasa ao aminy. Ny sidina dia nanjary hery tsy azo soloina ho an'ny tsara, mampifandray ny olona sy ny tanàna, manamora ny fivezivezena ara-barotra sy ny dian'ny mpandeha izay mitondra fanambinana sy fifaliana ho an'ny olona an-tapitrisany.
Ny mpandeha dia hanana fotoana hiaina ny fiaramanidina A380 vaovao an'ny Emirates izay manasongadina ny seza Premium Economy vaovao an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary ny atitany mitaingina efitrano vaovao manerana ny kilasy kabine rehetra.
Ireo mpandeha mandeha amin'ny EK2021 dia afaka miaina ny serivisy sy ny serivisy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai alohan'ny hidirany.
Ho fanampin'izany, ny mpanjifa dia afaka manandrana mivantana ihany koa, ny fepetra farany farany hanampiana ireo mpandeha mankafy làlana azo antoka sy milamina, ao anatin'izany ny teknolojia biometrika sy tsy misy fifandraisana vaovao izay napetrak'i Emirates vao haingana teo amin'ny faritra fisavana sy vavahady fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Dubai. .
Tamin'ity volana ity, Airbus dia nandefa rindrambaiko mpiara-dia aminy antsoina hoe "Tripset". Ny fampiharana dia manangona sy manome fampahalalana momba ny sidina sy fitsangatsanganana mba hanamorana sy hamerenana ny fahatokisan'ny mpandeha ny diany mankany amin'ny farany rehefa mandeha amin'ny rivotra mandritra ny areti-mandringana COVID-19. Tripset dia mamela ny mpandeha hampandrenesina ny fepetra momba ny dia farany sy mifandraika indrindra amin'ny lalàna mifehy ny dia ary tsy mila manatona loharanom-baovao isan-karazany.
Ny birao fizahan-tany Anguilla dia nanambara ny talen'ny fizahantany vaovao momba ny fizahantany
Nanafatra ny fampielezana vaksiny i St. Barts hanokatra ny sisin-tany